Jamaal Cali Xuseen Ayaa Si Qoto Dheer Uga Hadlay Socdaalkii Madaxwayne Siilanyo Ee Gobolada Wadanka | Saxil News Network
Jamaal Cali Xuseen Ayaa Si Qoto Dheer Uga Hadlay Socdaalkii Madaxwayne Siilanyo Ee Gobolada Wadanka
(SAXILNEWS.COM) : Musharaxam Madaxwayne ee Xisbiga UCid JAmaal Cali Xuseen ayaa soo saaray qoraal dheer oo uu kaga hadlayo safarkii Madaxwaynaha Somaliland kusoo maray gobolada iyo degmooyinka Somaliland , waxaana uu sheegay inuu safarkaasi ahaa mid tamashle ah dhanka kalena olole ayuu kaga tilmaamay Jamaal Cali Xuseen haddaba halkan ka akhri qoraalkii Jamaal soo saaray oo dhamaystiran:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xaquu buu u leeyahay in uu bulashaddiisa ka warhayo oo safaro ku soo maro. Laakiin markaad u fiirsatid safaradda u kuur galka xaaladda dadkaagu waxay u baahan tahay in marka aad xilka qabatid aad sidan oo kale u soo wareegtid, laakiin kuma haboona maalinta ay xilkaagii dhowr bilood ka hadhsan tahay.
Dalalka dhaqaalaha weyn leh iyo kuwa inala deriska ahba miyaad weli ku aragteen dawladdii oo dhan oo macaa wasiiradeeddii intay is daba yaaceen dalkoo dhan ku wareegaya? Haddii madaxweynahu uu uba kuur gelayo dadkiisa, miyaaney habooneyn wafti kooban oo wasiirkiisa daakhiligga iyo gacan yarayaashiisu uun inay la socdaan? Maxaa keenay in xataa dad aan dawladda ka tirsaneyni ay waftigaasi ka mid ahaayeen iyagoo aad u tiro badan. Haddii Ilaahay Xisbigga UCID ku guuleeyo talladda qaranka, anagu marnaba ma sameyn doono safarkan oo kale oo dhaqaalaha danyarta umma adeegsan doono in ay cid weliba ku jirto safarka madaxweynaha. Tix-gelintayaddu waxay toosh ku eegi doontaa adeegga ay bulshaddu ka sugayso Qaranka, iyo dhaqaalaha liita ee laga soo ururiyey danyarta. Dhaqaalaha ka sokowna may aheyn in laguna lumiyo wakhti badan oo ay ahayd in xukumaddu u adeegto bulshadii ka sugaysay waxqabad, iyadoo masuul kastaa min degmo, gobol iyo ilaa heer wasaaradeed halkooda ay ka hawlgali karayeen, balse ayna ahayn in socdaal ay is daba yaacaan sidaan kuraas buushash ah iyo dad u sacabo tuma bulashada kaga lumiyaan hanti iyo wakhti.
Xisbiga UCID waxa uu daaha ka rogayaa in socdaalkii madaxweynaha ee min Awdal ilaa iyo Sool uu ahaa mid ay madaxweynaha ugu horeysay badankoodda deegaamidii uu ku soo maray lugta deg-dega ah ee aan hoos loogu daadegin baahiyaha dhabta ah ee ka jira deegaamadaas oo uu qarankan ku ahaa mid khasaare ah oo aan waxba ka badaleynin waayaha
deegaamadaas oo ah kuwo kusii kala liita adeegyadii ay ka waayeen xukumadda Kulmiye oo shantii bilood ee ugu dambeeyey mudadii dastuurku u jideeyey in ay dalkan hogaamiso olole u isticmaashay socdaal baashaal ah oo la doonayo in indho-sarcaad looga dhigo safarkan bulshada Somaliland ee maanta sida weyn u soo jeeda.
Socdaalka madaxweynuhu muu ahayn wax ka badan khudbado faan ah iyo ballamo aan wax la taaban karo lahayn, iyo xataa garowshiiyo ah in wixii ay hore ugu balan qaadeen oo aan halkooddii laga soo qaadin maadaama ay dadkii ay u tageen ku cawdeen wixii hore ee loo balan qaaday ay weli sugayaan. Sidoo kalena ma jiro wax deegaamadda uu lugta deg degaga ah dhigay oo lagu darsayo baahiyaha ka jira, taas oo muujinaysa qorshe la’aanta socdaalkaas oo ujeedadiisu ahayn sida ummadda loogu sheegay.
Socdaalkii madaxweynuhu waxa uu muujiyey dhiiranaanta ay xukumadani ugu jirto dib u soo celinta dhaqamadii aynu ka dhiidhinay ee kali taliska iyo Kacaankii bulashada sacabtumistiisa u soo dareerin jirtay dariiqyada. Waxa socdaalkii madaxweynaha si weyn uga muuqday abaabulka ardayda dugsiyadda oo halkii loo dayn lahaa wakhtigoodda waxbarasho Wasaaradda Waxbarashadu u soo dareerisay dariiqyadii uu marayayey madaxweynuhu iyagoo lagu soo raray halkudhiyo iyo caleemo loo lulo oo ay kaga fogaanayso xaqiiqada dhabta ah. Haddii Ilaahay nagu guuleeyo marnaba ogolaan mayno in arday inta iskuuladda laga soo dareeriyo ay wadadda noo istaagaan oo noo sacabo tumaan. Xukuumaddu waxay ahayd in ay hoos ugu daadagto danaha ummadda oo ay ka baxdo isku -camiridda iyo is-caleemo saarka xili dalka ay ka jiraan baahiyo, da’yarteeniina ay badaha ku dhamaadeen.
Ilaahay kheyrka hayna waafajiyo